CHANEL Mumwe Flap Chain Mahwendefa Mabhegi Akasviba Anodzika Lambskin Puru y14 - hannari-shopu
CHANEL Kamwe Kubhuroka Chain Bhegi Bhegi Guru Akadzingwa Lambskin Purse y14
Regular price $2,999.00 $2,699.00 sero
Ichokwadi CHANEL Imwe Flap Chain Bhegi Bhegi Yakakora Yakagadzirwa neakasviana Lambskin Purse y14 Ichi chinhu chiri Chinyorwa. Mwaka wekugadzira waigona kunge uri 2003.
Seri #: 8922163 (pane chimuti chete. Hapana kadhi.)
Inouya ne: Bhokisi, Guruva bhegi
Pakazara: 8 pagumi - Iyo yekunze iri mune yakanakisa mamiriro ane mashoma zviratidzo zvekushandisa chete. Ganda racho richiri kupusa. HAPANA anoonekwa anotsvairwa, mamaki emakara kana makanda. Iyo yemukati zvakare yakanaka uye yakachena kwazvo. Maketani ese nemidziyo inopenya uye yakanakisa. Bhegi reguruva uye bhokisi zvakare zvakanak. Zvakanyanya kukurudzirwa!
Approx. saizi: H4.9 "x W9.9" x D1.7 "(H12.5 x W25.2 x D4.3 cm)
Approx. tambo kudonha: 12.2 "(31 cm)
Iyo mannequin inogona kunge iri diki pane yako. Akapfeka hembe dzakakura US 6. Izvo zvipfeko, mannequin, uye iPhone hazvibatanidzwe. Isu tinoisa teki yekuchengetedza pane chinhu kuti ive nechokwadi chekuti chinhu chacho hachina kupfekwa mushure mekuendeswa, kana kuti hachishandurwe kubhegi rakasiyana. Hatisi kuzobvuma kudzoka kana iwe ukabvisa teki yedu pane chinhu.